Ambohidava Ambohidrapeto Taolambalo maro no lasan’ireo mpamaky fasana
Taksibe Ivato Mbola misy manao ny ataony ihany
Na dia efa natao zotra filamatra aza ireo taksibe ao amin’ny zotra D mampitohy an’i Vassacos amin’ny tanànan’Ivato dia mbola misy ihany ireo manao ny ataony.
Fiaraha-miasan’ny GFEM sy ny AFHAM Vehivavy manana fahasembanana efatra no efa nahita asa
Efa manomboka migoka ny tombontsoa azo avy amin’ny fiaraha-miasa tamin’ny fivondronan’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara na ny GFEM ireo vehivavy manana fahasembanana mivondrona ao anatin’ny AFHAM.
Firaisana fahefatra Vazaha nanao tsinontsinona mpiasa
Misy ny filaharana rehefa manao taratasy eny anivon’ny firaisana ary misy ny fandaminana amin’izany.
Nitrangana vaky fasana teny Ambohidava Ambohidrapeto, distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Tsy dia fantatra loatra ny fotoana nitrangany.
Ireo mpihady fasana nialoha lalana ireo mpandevina tao an-toerana ny alatsinainy teo no nahita voalohany. Akory ny hatairan’izy ireo fa efa nivoha ny fasana. Ankoatra izay dia nalain’ireo tsy mataho-tody avokoa ny razana tamina farafara vato iray izay voalaza fa razambe avokoa. Ny lamba sisa no najanon’ireo mpanao ratsy. Voatery niantso mpitandro ny filaminana ireo tompom-pasana sy ny fianakavian’ny maty ka niandry fotoana maromaro ilay razana lena vao azo nampidirina indray. Nitombo avo roa heny ny fahorian’ny rehetra izay tena nanohina ny fo tokoa. Raha ny angom-baovao azo hatrany dia ity vaky ity no fasana voalohany indrindra teny Ambohidava Ambohidrapeto.